Palestina: miantso mifananihany amin’ny tafika israeliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Aogositra 2019 6:40 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny taona 2009 ity adika eto ity)
Jordaniana Palestiniana Ali Dahmash manontany tena hoe aiza no ahafahan'ny Gazaita mandositra. Hoy izy nanoratra:
Tamin'ny Asabotsy, nanipy taratasy kely tany amin'ireo sivily ao Rafah, atsimon'i Gaza i Israely. Nampitandrina ireo Palestiniana mba handositra ny tranony ireo taratasy kely ireo. Nanontany tena aho hoe aiza no handosiran'ireo sivily ireo. Tsy manana toeram-pialofana izy ireo, ny hany fialofan'izy ireo dia ny sekolin'ny Firenena Mikambana, ny hopitaly, ny moskea & ny fiangonana izay efa nodarohana baomba. Nodarohan'i Israely baomba ihany koa ny seranam-piaramanidina 6 taona mahery lasa ka tsy azo idirana, nosakanan'ny sambo mpiady Isiraeliana ihany koa ny ranomasina ary efa 2 taona ankehitriny no nobahanan'i Israely sy Ejypta ireo sisintany.
Tsotra fotsiny toy izao ny hafatr'i Isiraely: “Tonga hamono anareo izahay !!”
Manoratra ao amin'ny bilaogy vondrona Amerikana-Palestiniana, KABOBfest, hoy i Will:
Tsy tao an-tsaiko raha natao ho amin'ny seraseram-bahoaka na ny Bemidina Ara-psykôlôjika ireo antso an-telefaonina mandeha ho azy sy ireo taratasy kely. Zavatra iray no azo antoka, tsy natao hanampy ny Palestiniana izy ireo.
Hoy koa izy nanampy:
Mamelona ny angano hoe olombelona ny tafika Israeliana ny fifandraisana toy izany. Mamofona avy amin'ny sehatra fiadian-kevitra rehetra ny aterineto izay hilazan'ireo tantelimby (drôna) prô-Israeliana fa tena manampy ireo antso sy taratasy kely, na mampiseho hoe hatraiza no vitan'ny IDF mba hisorohana ny fahafatesana sivily.
Mifanohitra amin'izany, mampahatsiahy fotsiny ho an'ireo Gazaita ny toetra vatovatoina sy tsy mifanditrovana ao amin'ny fitondrana Isiraeliana sy ny tsy firaharahiana tanteraka ny manjo ireo Palestiniana izany.
Iray amin'ireo taratasy kely ny sary etsy ambony avy amin'ny Electronic Intifada, miresaka amin'ireo mponin'i Gaza toy izao:
“Raiso ny andraikitrao amin'ny manjo anao.” Loza ho anao sy ny fianakavianao ireo mpitoraka balafomanga sy ny mpampihorohoro. Raha te-hanome fanampiana ho an'ny fianakavianao sy ny rahalahinao any Gaza ianao, ny hany tokony ataonao dia ny miantso ny laharana etsy ambany mba hampahafantatra momba ny toerana misy ireo mpitoraka balafomanga sy ny jiolahy mpampihorohoro izay nanao anao ho takalon'aina amin'ny asa ataony. Eo an-tananao ankehitriny ny fisorohana ny loza.”
Rehefa nahafantatra momba ilay taratasy kely, nandray fepetra manokana ihany koa ilay Palestiniana Haitham Sabbah ary nanomboka fanentanana mandrisika ny mpamaky azy mba hiaviavy ny mailaka sy ny laharana finday ao amin'ilay taratasy kely mangataka amin'ireo Gazaita mba ho lasa mpilaza vaovao amin'ny hafatra:
So, what can be done? Simply, I encourage everyone to call above mentioned number (from your land line, mobile phone, Skype, etc.) and say in Hebrew “Atem Poshim, tafsiku laharog palestinayim, Palestien Meshuchreret, Gaza meshuchreret.”
Inona àry no tokony atao? Tsotra, mandrisika ny tsirairay aho mba hiantso ny laharana voalaza etsy ambony (avy amin'ny laharana any an-tranonao, finday, Skype, sns …) ary miteny amin'ny teny hebreo hoe “Atem Poshim, tafsilk palestinayim, Palestien Meshuchreret, Gaza meshuchreret.”
Izany dia dikan-teny hebreo midika hoe: “Jiolahy ianareo. Atsaharo ny famonoana Palestiniana. Omeo fahalalahana i Palestina. Omeo fahalalahana i Gaza.”
Ampiasao ihany koa ny mailaka voalaza etsy ambony ary apetaho ny iray amin'ireto sary na rohy raki-tsary manaraka ireto mba hampisehoana azy ireo ny vokatry ny heloka bevava nataon'izy ireo tany Gaza.
Mandritra izany fotoana izany, Palestiniana tonian-dahatsoratry ny Electronic Intifada nandray ny fanamby ara-bakiteny ary niantso tokoa ny laharana teo amin'ilay taratasy kely – miteny amin'ny teny Arabo amin'ny mpamaly izay milaza ny tenany ho Abou Ibrahim.
Ity misy sombiny tamin'ny resadresaka avy amin'ny Electronic Intifada:
EI: Eny, andao hiresaka … avelao aho hanome anao ny sasany amin'ireo vaovao ary hiresaka bebe kokoa isika. Manana penina ve ianao?
Manamboninahitra Isiraeliana: Eny. Manana penina aho ary manoratra.
EI: Tiako omena anao ny anaran'ireo fikambanana mpampihorohoro goavana indrindra, tsy ao Gaza fotsiny fa any Palestina rehetra.
Manamboninahitra Isiraeliana: Ok, andao hojerena
EI: Eny, ny voalohany …
Manamboninahitra Isiraeliana: Ny tianao lazaina amiko dia avy any Hamas avokoa izy rehetra?
EI: Vahoaka izy rehetra … ho hitanao. Ny voalohany, Ehud Barak [minisitry ny fiarovana Israeliana] no anarany.
Manamboninahitra Isiraeliana: Ehud Barak? Andriamanitra ô! tsy misy tahaka anao …
EI: Faharoa, Gabi Ashkenazi [Lehiben'ny tafika Israeliana]
Manamboninahitra Isiraeliana: Fantatrao ve izy?
Nanamarika i Dion Nissenbaum ao amin'ny Checkpoint Jerusalem fa manokatra “varavarankely mahaliana ao an-tsain'ireo mpiantso andaniny roa” ny fihainoana ny fifampiresahana an-tariby.